Nagarik News - मण्डेलाको भाषण
Sunday 18 Jestha, 2077 | May 31, 2020
२२ मंसिर, २०७०
आज हामी सिंगै देश र विश्वलाई नवजात् स्वतन्त्रताको कोसेली चढाइरहेका छौं।
असाधारण मानवीय विनाश गराउने युद्ध रोकिएको दर्दनाक समयपछि हामी यस्तो समाज जन्माउँदैछौं, जसप्रति भोलि सिंगो मानवताले गौरव गर्नुपर्ने छ। हाम्रा दैनिक क्रियाकलाप सामान्य हुनेछन्। दक्षिण अफ्रिकी यथार्थसँग जोडिनेछन्। तिनले आम जनताको विश्वासलाई न्यायमा बदल्नेछन्। सबै आत्माहरू जनजीवनलाई गौरवमय बनाउन लाग्नेछन्।
हामीलाई प्रतिनिधि चुन्ने जनता र सिंगो संसारप्रति कृतज्ञ छौं।
मलाई यसो भन्न कुनै संकोच छैन, हामी सबै जनता यो सुन्दर भूमिसँग उत्तिकै दह्रोगरी गाँसिएका छौं, जसरी बुशभेल्डको शिरीष र प्रिटोरियाको फूल आपस्तमा गाँसिएका छन्।
प्रत्येक पल्ट हामी एक एकले यहाँको माटो छुँदा पूनर्ताजगी अनुभूत गछर्ौं। जसरी ऋतु बदलिन्छ, यो देशको मुड पनि त्यसरी नै बदलिन्छ। जसै फूल फक्रिन थाल्छन्, रुखले पालुवा हाल्छन्, हामी अपार आनन्दको गहिराईमा पुग्छौं।
त्यही भौतिक र आत्मिक एकताले हामीलाई यो साझा मातृभूमिभित्र दुःखपीडा बिर्सन सघाउँछ। हिजो हामीले यो देशमा भयानक द्वन्द्व भोगेका छौं। सँगै आँशु बगाएका छौं। त्यही जातिभेद र रंगभेदको तुच्छ मान्यताले हामीलाई संसारका अरु देशबाट पर कतै सीमान्तमा हुत्याइदिएको थियो।
हामी दक्षिण अफ्रिकी त्यो सुषुप्त मानवता फेरि ब्युँझाइरहेछौं। धेरै वर्षसम्म गुमाएको त्यो मानवता फेरि छातीमा टाँसिरहेछौं।
न्याय, शान्ति र मानवीय प्रतिष्ठाले जितेको यो ऐतिहासिक समयमा सरिक हुन आइपुग्नुभएका विदेशी पाहुनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं। शान्ति, समृद्धि, लिंगभेदविरोधी, रंगभेदविरोधी र लोकतन्त्रका सामू आइपर्ने चुनौतीसँग लड्न तपाईंहरू हाम्रो पक्षमा उभिइरहनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौं। हामी लोकतान्त्रिक, धार्मिक, महिला, युवा, उद्यमी, पुराना नेता र अरुले हिजोको राजनीतिलाई यहाँ ल्याइपुर्‍याउन खेल्नुभएको भूमिकाको दिल खोलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छौं। तीमध्ये उपराष्ट्रपति माननीय एफडब्लु डे क्लार्क उल्लेख्य हुनुहुन्छ।
लोकतन्त्रतिरको यो संक्रमणकालका बेला रक्तपिपासुहरूले यो पहिलो चुनावको उज्यालो देख्न अस्वीकार गरेका थिए। तिनबाट जोगाउँदै चुनाव सफल पार्न सघाउने सुरक्षाकर्मीप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्छौं। हिजोका घाउमा मलम लगाउने, निको पार्ने समय अब आएको छ। हिजो हामीलाई एक अर्कासँग छुट्ट्याउने खोलामा पुल हाल्ने बेला आइसकेको छ। त्यस्तो अवसरको खोजी गर्ने कि नगर्ने, अब हामीमा भर पर्नेछ।
हामीले अन्ततः राजनीतिक मुक्ति हात पार्‍यौं। अब यहाँका जनतालाई गरिबी, अभाव, पीडा, लिंगभेदलगायत भेदबाट सधैंका लागि बाहिर निकाल्नुपर्नेछ। यो महŒवपूर्ण काम अझै बाँकी छ।
हामीले स्वतन्त्रताको गन्तव्यतर्फ चालेका पाइलालाई अहिले सापेक्ष शान्तिसम्म ल्याइपुर्‍याउन सकेका छौं। हामी कसम खान्छौं, पूर्ण न्याय र शान्तिको यो यात्रामा हामी अविचलित भएर हिँडिरहनेछौं। लाखौं जनताको हृदयमा हामीले आशाको बिरुवा रोप्न सकेका छौं। हामी यस्तो समाज बनाउन गइरहेका छौं, जहाँ श्वेत र अश्वेत दुवै जनता निडरतापूर्वक सँगै लम्कनेछन्। उनीहरूका नैसर्गिक हक र मानवीय मूल्यको इन्द्रेणीले यो देश र विश्व एक दिन शान्त बन्ने छ।
यही प्रतिबद्धताको चिनोस्वरुप राष्ट्रिय एकताको नयाँ अन्तरिम सरकार बनेको छ। हिंसाको बेला जेल भोगेका, यातना खपेकालाई न्याय दिनु छ, क्षतिपूर्ति दिनु छ। उत्पीडक भनिएकालाई अवस्था हेरी आममाफी दिनेलगायतका निर्णय यसैले गर्नेछ। हामी सबै नायक र नायिकालाई यो दिन समर्पण गर्न चाहन्छौं, जसले हामीले आज पाएको यो मुक्तिका लागि उत्सर्ग गरे। त्यसैले हामी मुक्त हुन सक्यौं। उनीहरूको सपना आज साकार भएको छ। स्वतन्त्रता नै उनीहरूले हामीलाई दिएको पुरस्कार बनेको छ।
तपाईं जनताप्रति हामी प्रफुल्ल र विनम्र बनेका छौं, जसले एकीकृत, लोकतान्त्रिक, रंगभेदविरोधी, लिंगभेदविरोधी सरकारको पहिलो राष्ट्रपति हुने मौका दिनुभएको छ।
अहिले पनि स्वतन्त्रताका लागि बाटाहरू सजिला भइसकेका छैनन्। यो कुरा हामीलाई राम्रैगरी थाहा छ। हामी एक्लाएक्लै अघि बढ्न खोज्यौं भने यो सफलता हात लाग्ने छैन। त्यसैले हामी सँगै काम गर्नेछौं। राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्र निर्माण गर्दै हामी नयाँ विश्वको रचना गर्नेछौं। सबैलाई न्याय मिलोस्। सबैलाई शान्ति मिलोस्। सबैका लागि काम, खाना, पानी, नुन मिल्न सकोस्। सबैलाई थाहा हुन सकोस्, सबैको शरीर, आत्मा र मस्तिष्कले आफ्ना इच्छा पुर्‍याउन यो मुक्ति पाएका हुन्।
यो सुन्दर भूमिले अबदेखि कहिल्यै परस्पर शोषण, दमन, अत्याचार भोग्न नपरोस्। स्वतन्त्रताले सधैं राज गरिरहोस्। दक्षिण अफ्रिकाको जय होस्।
शुक्रबार बिहान बितेका महान विश्वनेता नेल्सन मन्डेलाले सन् १९९४ मा दक्षिण अफ्रिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति चुनिएपछि गरेको पहिलो सम्बोधन
भावानुवाद : बसन्त
महिला आन्दोलनमा शशी श्रेष्ठ पनि चर्चित नाम हो। चौथो महाधिवेशन, एकता केन्द्र हुँदै अहिले एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रीय सदस्य रहेकी श्रेष्ठ आफ्ना काइँला दाजु तथा वाम बुद्धिजीवी श्याम श्रेष्ठको प्रेरणाले...
दसैंको उल्लासले तासको खाल जमाउने, अकाशमा चंगा चेट् पार्ने कुरा पुरानै हुन्। हल्का चिसो मौसममा टे्रकिङ र समुद्र तटतिर बरालिन निस्किनेे समूह बिस्तारै बढ्दै छ। तर यीभन्दा भिन्न वसन्तपुरको दसैंघरमा...
२०१८ सालमा भोजपुर, मानेभन्ज्याङमा जन्मेकी विद्या भण्डारी विवाहपूर्व पनि राजनीतिमा थिइन्। यद्यपि उनका लागि विशेष राजनीतिक अवसरको उदय भने पति मदन भण्डारी (तत्कालीन एमाले महासचिव) को दुर्घटनामा निधनपछिको परिस्थितिले गराएको...
डा. भगवान कोइरालामतदाता, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर– ५आम नेपाली मतदाताझैं चिकित्सक डा. भगवान कोइराला पनि मंसिर ४ मा हुने दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा भोट हाल्न आतुर छन्। आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई जिताएर संविधानसभामा...
अन्तर्वार्ताले झन्डै जागिर खुस्केको
म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अंग्रेजी पढ्दाताका रेडियो नेपालमा ‘पार्टटाइम' काम गर्थें। दिउँसो त्रिविमा पढ्न धाउँथें भने प्रायशः चारबजेपछि रेडियो नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत काम गर्थें। यो २०२८/२९ सालतिरको कुरा हो।
वागमती लहरले उठेर बर्सिदेऊ...
पानी.....पानी.....पानीवागमती लहरले उठेर बर्सिदेऊ.....पानी.....पानी.....पानी
देश चिनाउने खेलहरु
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सबैभन्दा बढी पदक मार्सल आर्टसबाट प्राप्त गरेको छ। घरेलु मैदानमा आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुद हुँदा नेपालले तेक्वान्दो र करातेबाट मात्र १४–१४ स्वर्ण पदक जित्यो।
बीपी कोइरालाको मृत्युको खबर आगोझैं सल्केको थियो सहरमा। चारै दिशाबाट मान्छेको समुद्र उनको निवास जयवागीश्वरीतिर सलहसरी अघि बढिरहेथ्यो।
पहिलो दिन : ब्लड बैंकको गेट छिरिनसक्दै ऊ अत्तालियो। छपक्कै छरिएका बाइक देखेर अन्दाज लगायो– कम्तीमा...
दशक ६० को सौन्दर्य
काठमाडौं– मदन पुरस्कार विजेता राजन मुकारुङलाई जुनसुकै साहित्य–सभा सम्मेलनमा गए पनि एकैनासका विषय सोधिँदोरहेछ– आञ्चलिक लेखन,...
सानाले सुन्न नहुने कथाहरू
हाम्रो गाउँमा एकथरी अचम्मका कथा थिए। कथा पनि कस्ता भने केटाकेटीले सुन्नै नहुने। क्यैगरी सुनियो भने...
विम्ली आफैं बोली
'बुवा विम्लीको पेनको निभ भाँचियो!' मैले भन्दिनुपर्ने। 'बुवा विम्लीको कापी छैन!' मैले जानकारी दिनुपर्ने! 'बुवा विम्लीको...